शनिबार नेपालमा हालसम्मकै धेरै सं'क्रमित फेला, सक्रिय संक्र'मित ४३ हजार २१३ जना -
Homeसमाचारशनिबार नेपालमा हालसम्मकै धेरै सं’क्रमित फेला, सक्रिय संक्र’मित ४३ हजार २१३ जना
May 1, 2021 admin समाचार 498
शनिबार नेपालमा हालसम्मकै उच्च बि’न्दुमा कोरोना भाइसरसका बिरा’मी थपिएका छन् । १४ हजार ४०३ जनाको पीसीआर परि’क्षण गर्दा ५ हजार ७०६ जनामा र ५६६ जनाको एन्टीजेन परि’क्षण गर्दा ५७ जनामा गरी ५ हजार ७६३ जनामा कोरोना भाइरस सं’क्रमण पुष्टि भएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइ’रसका कार’ण थप १९ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।
थप ५ हजार ७६३ जनामा कोरोना भाइरस सं’क्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्र’मितको कुल संख्या ३ लाख २८ हजार ८९३ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रा’लयका अनुसार नेपालमा सक्रिय संक्रमि’तको संख्या ४३ हजार २१३ रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार २८७ जना निको भ’एका छन् ।
हालसम्म संक्र’मणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख ८२ हजार ८९२ पुगेको छ । हालसम्म कोरोना’को कारण ३ हजार २९८ जनाको मृ’त्यु भएको छ । यस्तै, हालसम्म ६७ जना क्वारे’न्टीनमा रहेका छन् । हालसम्म २४ लाख ८८ हजार ३५९ जनाको पीसीआर प’रीक्षण गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्,अफर ल्याएको छ। सुविधा अन्त’रगर्त एनआइसीको कार्ड प्रयोग गरी ग्यापुमा सामान किन्दा ग्राह’कहरुले १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने छन्।
ग्या’पुका अनुसार एनआइसी एसियाको कार्ड प्रयोग गरेर बिल तिर्दा ५ सय रुपैयासम्म १५ प्रतिशत क्या’सव्याक पाइने छ। यो अफर यही वैशाख २५ गतेस’म्मको लागि रहेको छ । डिसीनेपालबाट
March 27, 2021 admin समाचार 1125
May 5, 2021 admin समाचार 402
January 1, 2021 admin समाचार 3276
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (175241)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (168957)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (168745)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (168368)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (167364)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (166143)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (165589)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (164067)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158659)